Ungaba kanjani intombazane yekham
Iba intombazane webcam. Thola kusuka ku- $ 500 ngesonto. Noma kunini, noma kuphi.
Umsebenzi we-Web cam wokumodela
IFlirtymаniа yisiza esizimele sekhamera yewebhu. Amantombazane aseCam athola yonke inkokhelo, awekho ama-ejensi noma abalamuli abadingekayo. Awekho ama-CV noma izingxoxo - uzilawulela wena umholo wakho. Uhlelo lokusebenza lutholakala ngezilimi eziyi-17 kuwo wonke amapulatifomu athandwayo, kufaka phakathi awamaselula. Sakaza nge-Iphone, i-Android noma i-PC yakho. Ukukhumulela ababukeli akudingekile nakancane.
Imali engenayo yentombazane ephumelelayo ngeviki.
Thola imali online
Uthola imali ngomzuzwana wokuqala uqala ukusakaza. Uma izilaleli zakho zisebenza kakhulu, iyanda imali yakho yokugcina.
Izingcingo ezizimele ziyimali engaphezulu kwemizuzu yonke.
Ukukubonga, izibukeli zingakuthumela izinhlamvu zemali ngokuchofoza oku-1.
Sebenzisa noma iyiphi insizakalo ekulungele ukuqoqa iminikelo bese uthola umvuzo ngaphandle kwamakhomishini.
Noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi
Iphrofayili yakho ingumthombo wemali engenayo. Thumela izithombe namavidiyo, engeza izincazelo ezinoshukela futhi uqoqe ukubukwa.
Umsebenzisi ukhokhela ukubuka ngakunye kwesithombe sakho noma ividiyo; ukubukwa ngakunye okungu-50 kukhokhwa yinkonzo yethu.
Yabelana ngesixhumanisi sewebhusayithi kumanethiwekhi omphakathi, uwuthumele kuwebhusayithi yakho noma uwuthumele kubangani bakho ngamunye. Ngale ndlela uzothola inzalo ekuthengeni kwezibukeli ezibandakanyekile.
Ideshibhodi yokudlala ngothando ku-inthanethi
Khetha itimu yokusakaza kwakho. IFlirtymаniа ivumela imifudlana ye-thematic ngenxa yokusebenza kwayo eyakhelwe ngaphakathi. Akusekho ukukhathazeka okufanele ukwenze phambi kwekhamera! Khetha itimu nemisebenzi olungele ukuyenzela izinhlamvu zemali. Dala isembatho ngokuya ngekhodi yokugqoka futhi uthole imali ngokuxoxa nabalandeli bakho. Vumela ababukeli baqondise uhlelo lwakho.
Asikho isikhathi sokusebenza njalo? Zama ukuhola izinhlamvu zemali ngenkathi wenza i-yoga noma abashayeli bezindiza!
Yembula impilo yakho yansuku zonke, kepha kwenze kube mnandi ukujabulisa abalandeli bakho - yenza imisebenzi ecelwa ngababukeli bakho!
Unenyo izinyo elimnandi? Thola izinhlamvu zemali ngokuzelapha ngamakhekhe namakhukhi! Khombisa ababukeli ukuthi uthanda kangakanani ama-carbs!
EFlirtymаniа ukusakaza kungaqalwa ngokuchofoza kabili. Zama futhi ubone ukuthi kulula kanjani!
Bhalela abasemzini ngolimi lwakho lwendabuko futhi umhumushi owakhelwe ngaphakathi uzokwenza konke.
Kuhlanganisa izinsiza zewebhu webcam
Sebenza futhi uzuze kumasayithi amaningi namadivayisi ngasikhathi sinye. Kuphephile ngokuphelele.
Isamba esincane sokukhipha yi- $ 30. Sebenzisa i-VISA, i-Mastercard, i-PayPal, i-Yandex, i-QIWI, i-SEPA, izinsizakalo ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi yokukhipha imali.
Ukukhokha ngaphandle kokubuyisela emuva. Thola i-100% yemali engenayo, iFlirtymаniа ithatha imali ebuyiswayo.
Ukuhlala ungaziwa kubaluleke kakhulu emantombazaneni amaningi. Nge-Flirtymаniа ungakhetha izinga lokungaziwa onethezeke ngalo. Vele usebenzise izilungiselelo zobumfihlo ukuvimba abasebenzisi abathile nokufaka ohlwini lwabantu abamnyama ohlwini oluthile.
Faka ukuthintwa kokuqedelwa kufihlahlo yakho - khetha isidlaliso esingajwayelekile (esizokufihla ubunikazi bakho) nesifihla-buso esifanelekile.
Awukholwa ukuthi kulula kakhulu?
Yibheke bese uqala ukuhola namuhla!